ဗီယင်နာမြို့ - ဝိကိပိဒိယ
(ဗီယင်နာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဤနေရာသို့သွားရန် -	အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​ဗီယင်နာမြို့
ဩစတြီးယားနိုင်ငံအတွင်း ဗီယင်နာမြို့၏ နေရာ
- မြို့တော်ဝန် နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Michael Häupl (Social Democratic Party of Austria)
၄၁၄.၉၀ km² (၁၆၀.၂ sq mi)
၃၉၅.၅၁ km² (၁၅၂.၇ sq mi)
၁၉.၃၉ km² (၇.၅ sq mi)
၁၉၀ m (၆၂၃ ft)
- လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
၄၀၉၄.၅/km² (၁၀၆၀၄.၈/sq mi)
- မက်ထရို လူဦးရေ
- နွေရာသီ (DST)
ဗီယင်နာမြို့ သည် ဩစတြီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဖြစ်ပြီး ဩစတြီးယားရှိ ပြည်နယ် ၉ ခု အတွင်းမှ တစ်ခု၏ အမည်လည်း ဖြစ်သည်။ ဗီယင်နာမြို့သည် ဩစတီးယားနိုင်ငံ၏ အဓိကမြို့တော် ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁.၇ သန်း ရှိသည်။  မက်ထရို ဧရိယာတွင် နေထိုင်သော လူဦးရေမှာ ၂.၃ သန်းရှိပြီး ဩစတြီးယား လူဦးရေ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ ဩစတြီးယား နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့လည်း ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေး နှင့် နိုင်ငံရေး အချက်အချာ ကျရာ မြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ဥရောပ သမဂ္ဂအတွင်း ၁၀ ခုမြောက် လူဦးရေ အများဆုံး မြို့ ဖြစ်သည်။ ဗီယင်နာတွင် ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အိုပက် အစရှိသော အရေးပါသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ရုံးထိုင်ကြသည်။
ဗီယင်နာသည် ဩစတြီးယား နိုင်ငံ၏ အရှေ့ပိုင်းတွင် ရှိပြီး ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ နယ်စပ်တို့နှင့် နီးစပ်သည်။ ဗီယင်နာသည် အနီးအနားရှိ ဘရာတီဆလာဗာ မြို့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး နေထိုင်သူ ၃ သန်းရှိသော မက်ထရိုပိုလီတန် ဒေသကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အမြွှာမြို့တော်ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် မြို့တော်ခန်းမကို ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေခံနေရာများ စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ 
၂၀၀၅ ခုနှစ် တကမ္ဘာလုံးရှိ မြို့တော် ၁၂၇ မြို့ကို စီးပွားရေး စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး ယူနစ်မှ အဆင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ဗီယင်နာမြို့သည် ဗြိတိသျှ ကိုလမ်ဘီယာရှိ ဗန်ကူးဗာ မြို့ နှင့် အတူ လူနေမှု အဆင့်အတန်း အမြင့်မားဆုံး အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ် ခံခဲ့ရသည်။  မာဆာမှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် စစ်တမ်းတွင်လည်း ထိုအချက်ကို ထင်ဟပ်ပြသခဲ့သည်။ 
ဗီယင်းနာမြို့ကို တစ်ခါတစ်ရံ 'ဒန်းညုမြစ်၏ ဘုရင်မ'ဟု ခေါ်ကြသည်။ အများအားဖြင့် ဗီယင်နာမြို့ကို ဒန်းညုမြစ် လက်ျာဘက် ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်ဟု ပြောကြသော်လည်း စင်စစ်မူ ဒန်းညုမြစ် လက်ျာဘက်ကမ်းနှင့် အနည်းငယ်ကွာလှမ်းသည်။ ဗီယင်နာမြို့ဟောင်းနေရာသည် ဒန်းညုမြစ်နှင့် မိုင်အတော်ကွာ လှမ်း၍ မြို့သည် တဖြည်းဖြည်း တောင်၊ မြောက်နှင့် အနောက် ဘက်တို့သို့ ကျယ်လာသော်လည်း မြစ်ဘက်သို့မူ အတန်ငယ် သာ ကျယ်လာသဖြင့် မြစ်ကမ်းနှင့် ကွာလှမ်းလျက်ပင် ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဒန်းညုမြစ်မှ ဖြာထွက်သော ဒိုနိုကနဲခေါ် ဒန်းညု တူးမြောင်းသည် ဗီယင်နာမြို့လယ်မှ ဖြတ်စီးသွားသဖြင့် ယင်း သည် ဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီး ဖြစ်နေသည်။ ဗီယင်နာမြို့သည် အဲ့လပနှင့် ကာပေသီယန်တောင်ကြားလွင်ပြင်တွင် တည်ရှိ သဖြင့် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ထားသော ကုန်း လမ်းများက ဖြတ်သွားနိုင်သောကြောင့်လည်း ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေး ဗဟိုမြို့ကြီး ဖြစ်နေလေသည်။
ဗီယင်နာမြို့သည် ဥရောပတိုက်တွင် သမိုင်းဝင်မြို့ကြီး တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် စာပေ၊ ဂီတ၊ သိပ္ပံနှင့် အခြားပညာ ရပ်များ ထွန်းကားရာ ကမ္ဘာကျော် အချက်အခြာမြို့ကြီး ဖြစ် သဖြင့်လည်း 'တောင်ဘက်ပိုင်း၏ ပါရစ်မြို့'ဟု ခေါ်စမှတ်ပြုကြ သည်။ ဗီယင်းနားမြို့သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီက ၁ဝ၆ ၁/၂ စတုရန်းမိုင်သာ ကျယ်ဝန်းသော်လည်း စစ်ပြီးသောအခါ ၄၆၉ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းလာသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီ က ဩစတြီးယားနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံဖြစ်သော လူဦး ရေ ၂ သန်းခန့် ဗီယင်းနားမြို့၌ နေထိုင်သည်။ စစ်ပြီးနောက် ပင်လျှင် ၁၉၅၆ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဗီယင်းနားမြို့၌ လူဦးရေ ၁Ý၇၆၆Ý၁ဝ၂ ယောက် ရှိလေသည်။ ဗီယင်းနားမြို့ဟောင်း၏မြို့ရိုးကြီးများ နေရာတွင် လမ်း ကျယ်ကြီးများ ဖောက်လုပ်ထားသည်။ဗီယင်းနားမြို့ အလယ်ပိုင်း ကို အတွင်းမြို့ဟု ခေါ်သည်။ အတွင်းမြို့တွင် အစိုးရရုံးများနှင့် ထင်ရှားသော အဆောက်အအုံများ ရှိသည်။ အတွင်းမြို့ရှိ လမ်း အချို့သည် ကျဉ်း၍ ကောက်ကောက်ကွေးကွေး ဖြစ်နေသော် လည်း၊ အချို့ရပ်ကွက်၌မူ ခေတ်မီရိပ်သာများ၊ အဆောက်အအုံ များဖြင့် ပြုပြင်ထားသည်။ အတွင်းဘက်ကျသော လမ်းကျယ်ကြီးတစ်ခုကို ရင်းစတြော့ဟု ခေါ်သည်။ ရင်းစတြော့ လမ်းကျယ်ကြီး၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် လှပခမ်းနား သော ပန်းခြံကြီးများ တည်ရှိသည်။ အတွင်းမြို့၏ အလယ်တွင် ဗီယင်းနားမြို့၏ အထင်ရှားဆုံးသော အဆောက်အအုံဖြစ်သည့် စိန်စတီဖင်သကီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ရှိသည်။ ယင်းသည် ပေပေါင်း ၄၅ဝ မြင့်သည်။အခြားထင်ရှားသော အဆောက်အအုံ များမှာ ၁၂ဝဝ ပြည့်နှစ်လွန်လောက်မှ ၁၉၁၈ ခုနှစ်အထိ 0x100သစတြီးယားနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်သွားခဲ့ကြသော ဟက်စဗတ် မင်းဆက်တို့ စံမြန်းရာနန်းတော်၊ ပေ ၃၂ဝ မြင့်သည့် မျှော်စင် ရှိသော ရာထောင်းခေါ် မြို့တော်ခန်းမ အဆောက်အအုံ၊ ပါလီမန်အဆောက်အအုံများ၊ အနုပညာနှင့် သဘာဝသမိုင်း ပြတိုက်၊ ကမ္ဘာကျော် ဗီယင်းနားတက္ကသိုလ်၊ အော်ပရာကပွဲရုံ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ဗီယင်းနားမြို့နေ လူထုသည် အများအားဖြင့် ဂျာမန်စကား ကို ပြောကြသည်။ သို့ရာတွင် ဂျာမန်တို့ ပြောသည့် လေထက် ပျော့သည်။ ဗီယင်းနားမြို့သူ မြို့သားတို့တွင် ဗရင်ဂျီဂိုဏ်းဝင် များသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီက ဗီယင်းနားမြို့တွင် ယဟူဒီ(ဂျူး)လူမျိုး ၂ သိန်းခန့် ရှိခဲ့သော်လည်း၊ အချို့အသတ် ခံရ၍ အချို့ အနှင်ခံရသဖြင့် စစ်အပြီးတွင် တစ်ယောက်မျှ မရှိတော့ချေ။ ဗီယင်းနားမြို့သည် နာမည်ကျော် စာရေး ဆရာ၊ သိပ္ပံပညာကျော်နှင့် သီချင်းရေးဆရာကြီးများ ဖြစ်သော ဂျိုးဇက် ဟိုင်းဒင်း၊ မိုးဇတ်၊ ဗေးထိုးဗင်၊ ရှူးဗတ်၊ စတြော့၊ အာနိုစကွန်း ဗတ်တို့၏ ဇာတိမြို့ ဖြစ်သည်။ စိတ်ပညာကျော် ဆစ်ဂမန် ဖရွိုက်သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ချိန်အထိ ဗီယင်းနားမြို့၌ နေထိုင်ခဲ့သည်။
ဗီယင်းနားမြို့သည် လက်ဝတ်လက်စား ရွှေxည္ ငွေထည် ပန်းချီနှင့် ရုပ်ထုစသော လက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အနုပညာဘက်တွင် ထင်ရှားသော်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်း အနေနှင့်မူ စက်ပစ္စည်း၊ အထည်အလိပ်၊ မျက်မှန်ဆိုင်ရာ ကရိယာများ စသည်တို့သာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဥရောပနိုင်ငံတို့၏ မြို့ကြီးများနှင့် ရထား လမ်း ကားလမ်း ရေလမ်းတို့ဖြင့် ဥဒဟိုအဆက်အသွယ်ကောင်း သဖြင့်သာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဗဟိုမြို့ကြီး ဖြစ်လာခဲ့ရ သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် ဗီယင်းနားမြို့၏ စက်မှု လုပ်ငန်းများစွာ ပျက်စီးခဲ့ရရာ၊ တစ်ခါက ဩစတြီးယားအင် ပိုင်ယာကြီး၏ နေပြည်တော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည့် ဘဝမှ ဩစတြီး ယားနိုင်ငံငယ်၏ မြို့တော်ဘဝသို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။ ဗီယင်းနားမြို့သည် ခရစ်တော်ပေါ်စ ရောမလူမျိုးတို့ ကောင်းစားစဉ်ကပင် ရောမတို့၏ ဗင်ဒိုဗိုနာတပ်မြို့ဟု တွင် ခဲ့သည်။ ရောမအင်ပိုင်ယာကြီး ပြိုကွဲသွားသောအခါ ယင်း တပ်မြို့ကို ခရစ် ၄၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အတီလာက သိမ်းပိုက် ခဲ့သည်။ ၇၉၁ ခုနှစ်တွင် ရှာလမိန်းဘုရင်က သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြန်၍၊ ၁၁၅၆ ခုနှစ်တွင် ဩစတြီးယားနယ်စားက ဗီယင်းနားမြို့ကို သူ့နယ်၏မြို့တော် ပြုခဲ့လေသည်။ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲများအတွင်း တွင် ဗီယင်းနားမြို့သည် ပိုမိုကျယ်ဝန်း၍ ပိုမိုတန်ခိုး အာဏာ တက်လာသည်။ ၁၂၇၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဟက်စဗတ်မင်းဆက်၏ နန်းစိုက်မြို့တော် ဖြစ်လာရာ ၁၅၂၉ ခုနှစ်တွင် တူရကီတို့ တိုက်ယူသိမ်းပိုက်သည့် အချိန်အထိ ဖြစ်သည်။ ၁၆၈၃ ခုနှစ် တွင် တူရကီတို့ကတစ်ဖန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြန်သော်လည်း မအောင် မြင်ခဲ့ချေ။ ဆဋ္ဌချားဘုရင်နှင့် မရီးယားထရီးဇားမိဖုရားတို့ လက်ထက်တွင် ဗီယင်းနားမြို့သည် ပိုမိုထင်ရှားကြီးကျယ် လာရုံမက လူဦးရေလည်း ၂ ဆ တိုးလာသည်။ ၁၈ဝ၅ ခုနှစ် တွင် ပြင်သစ်ဘုရင် နပိုလီယန်က သိမ်းပိုက်ခဲ့သော်လည်း၊ ၁၈၁၄ ခုနှစ်တွင် ဗီယင်းနားမြို့၌ ကျင်းပသော ဗီယင်းနား ကွန်ဂရက်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြင်သစ်တို့သည် ဗီယင်းနား မြို့ကို လက်လွှတ်ခဲ့ကြရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဟက်စဗတ် မင်းဆက်များ ဆက်လက်အုပ်စိုးခဲ့ရာ၊ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးသည့်အချိန်အထိ ဖြစ်လေသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး တွင် ဩစတြီးယားနိုင်ငံဟူ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရာ ဗီယင်းနား မြို့သည် မြို့တော်ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်တပ် များက သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း၌ ဗီယင်းနားမြို့သည် ဗုံးဒဏ်ကို အကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရသဖြင့် ရင်းစားပြန်မတည်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရုရှတို့က သမ်းပိုက်ထား ပြီးနောက် ဂျာမန်တို့ လက်နက်ချသောအခါ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှနှင့် ပြင်သစ်တို့ ခွဲဝေအုပ်ချုပ်၍ ပြန်လည် ထူထောင်ကြသည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ကြီးလေးကြီး စစ်တပ်များ ရုပ်သိမ်းသွားကာ ဩစတြီးယားသမ္မတနိုင်ငံဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ ဗီယင်း နားမြို့ပင် မြို့တော်ဖြစ်လာသည်။ 
↑ STATISTIK AUSTRIA - Bevölkerung zu Jahres-/Quartalsanfang. Statistik.at (2009-02-13). Retrieved on 2009-05-06။
↑ "Vancouver is 'best place to live'", BBC, October 4, 2005. ↑ Woolsey, Matt. "Forbes Magazine 2009", Forbes.com, 2009-04-27. Retrieved on 2010-06-13. ↑ Mercer's Survey 2010. Mercer (26 May 2010).
"http://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗီယင်နာမြို့&oldid=199240" မှ ရယူရန်	ကဏ္ဍ: ဥရောပရှိ မြို့များ	Navigation menu
ဤစာမျက်နှာကို ၈ မတ်​၂၀၁၃ ရက် ၁၈:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။